Short Story: Kwachakazosvika chiramu naMaiguru! – VanodaZvinhu
Short Story: Kwachakazosvika chiramu naMaiguru!
by DrSviro · July 10, 2015
Maiguru vakaroorwa namukoma vakatanga kugara pamba ndichiri mwana mudiki ndiine 12 years saka ndakakura vakatarisa tichitamba chiramu. Ndiye munhukadzi wekutanga wandakabata zamu.
10 years later, we are now in Cape Town mukoma nehure yavo vachiita yavaiita ini ndichiitawo yandaiita. Ndakange ndakura ndakuziva nezveupenyu, chandakaongorora ndikaona ndechekuti maiguru vakange vasisina mufaro Nekuti mukoma vakange vave kuhura zvakanyanya asi ndaingoita kunge ndisina yandinoziva. Maiguru vakange vave kugara vakatsamwa zviya zvinoita munhu asuwa mboro.
Rimwe zuva mukoma vaenda kubasa Iniwo ndakanonoka kumuka ndikatoona kuti Zvirinani ndiregedze kuenda kubasa Nekuti ndaizongodzeserwa kumba. Ndakaenda mubedroom mavaive vakarara havana kana kundinzwa kupinda sezvo vaive deep in her thoughts. Vakatozonzwa kuti pane munhu apinda ndareducer volume pat.v iyo yange ichingowawata pasina akateerera. “Aah bamunini handina kumbokunzwai muchipinda, Ko sei muchinyangira?” vakaita zvekuvhunduka pavakandiona. “Handina kunyangira ini maiguru inga ndaknocker wani, hamuna kudya sadza nezuro manheru, hindava?” ndakakuudza, “Ndaive ndakaguta ini bamunini ” vakadaro vakanditarisa mumaziso,
“Aaaaaa papi pacho pamakamboti ndakaguta kwabikwa sadza neguru ndinoziva kuti ndizvo zvamunofarira” ipapo vakange vave kubuda mumagumbeze apa vaive vakapfeka night dress repink aya ataiziva achinzi maspagheti top rimwe rutivi raive rakasiya rimwe zamu pachena. Vakakurumidza kuzviona asi ziso rainge raona yese. Maiguru vainge vakabatana before varoorwa zvekuti chero neni ndaigarozviudza kuti ndirikuda kutsvaga mukadzi akaita samaiguru. Dai isiri stress plus kuti akazvara vana vaviri muviri wavo waive wave kusiiwa nenguva.
Vakamuka vakabva vagara paside neni vakatanga kundiudza zveshuwa zvaiitwa namukoma, “Ndizvo zvirikuita mukoma wangu bamunini, Iyezvino anorwara , ane S.T.I yaakawana kumahure ake. Izvozvi ndatove ne3 months ndisina kurara ne…” havana kuzokwanisa kupedza muromo uyu nekuti vakange vosvimha misodzi. Ndakavambundira ndichivanyararidza. Ndakagumha zamu riye ndikanzwa asekuru vaye vave kusimuka mubhurugwa. Mboro inondishamisa, haina basa nekuti uripai uye chii chirikuitika, inongosimuka kana yada. Maiguru vakazviwona vakabva vasimudza chiso vakanditarisa. Ndakapukuta misodzi yaive pamatama avo, vaive nechiso chakanaka chaive chisina kana bundu.
Malips avo aive mahombe, ari juicy, zvekuti you can empty your bank account just to kiss them. Chokwadi mukoma vaive vakagona kusarudza asi vaive vakanganwa kuti ngoma yavo vanofanira kuiridza sei. Before I knew it, we had already locked our lips. The kiss was so passionate and I didn’t stop there, ndakabvisa night dress riye ndikakanda kwakadaro. Ndakabata minyatso kusvika yaita kakuomarara apa vakange vave kufemera pamusoro nechemumoyo ndikati ‘nhasi hangu’ pandakazoisa ruoko mubhurugwa wanikwe maihwe…river Nile, ‘manje ndichagona kuyambuka here rwizi urwu?’ ndakange ndozvitongesa nechemumoyo.
Ndakatanga kuplanter makisses kubvamuhuro kudzika kumazamu nepaguvhu kusvika pamuparavara wemheche waiita kunge wakagerwa nezuro, hameno pamwe zveshuwa waive wakagerwa zuro. Ndakatanga kudya beche zvekuti dai musikana wangu akasvika akandiona aiindibvunza kuti sei ndisingambozviiti kwaari. Mwana wevanhu akatanga kuiridza mhere ndakatozobata muromo kuti ruzha rwudzikire. Vakatanga kugwinha ndikaziva kuti munhu akuda kutunda ndikamira ndikabvunza kuti condom ndoriwana kupi shasha yakamuka nehasha ikabva yandibvisa trousers nekukwira apa long John vainge vatsamwa kare vakabva vaidhonzera kwavari vachibva vaibairira ndakaona munhu achishama muromo zvekuti tsuro yaigona kupinda ikakwana. Vandizevezera munzeve kuti ‘usatye hako ndaneta 6 months ndisina kurara namukoma wako kubva zvandakaziva kuti ane S.T.I’.
Ndakakwesha maiguru for 20 minutes paposition imwechete, missionary. Takazochinja ivory vakaenda pamusoro, amana kana, kuteni vakadzi vanokwira ndakakwirwa sebhiza apa vachipuruzira machende angu apa ndakanga ndave kuda kutunda ndikati mirai tikachinja futi tikaita. Ndakarova kwedzimwe 20 minutes. Munhu akatunda kahobho neniwo ndikazotundawo. Maiguru vakazviwona rabada pamubhedha vafizuka vakandiudza kuti mukoma wako Haasati ambondikwira seizvi uye musikana wangu aive azviwanira Simbi yebasa. Izvi zvakaramba zvichiitika kwenguva refu, mukoma namaiguru vakazosiyana ndikange ndave kuvaona everyday kwavaigara tichiramba tichidzokorodza zvakaitika musi uyu
Varume mudzimba umo kwirai vakadzi venyu otherwise ana bamunini vanozorima mundane wenyu.
by DrSviro · Published November 22, 2015
Next story Short Story:I always had eyes on him
Previous story Short Story: Murume ndewedu TESE!